म्यानपावर धेरै, ठगी अचाक्ली
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामामिला हेर्ने विशेष अदालत भनेकै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण हो। ढिलै भए पनि न्यायाधिकरणले यस क्षेत्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। किनकि, विगतमा एकैपटक यति धेरै म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही भएको थिएन। न्यायाधिकरले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४७ (१) अनुसार म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई कैदकै सजाय सुनाएको छ। रोजगार विभागका अनुसार हाल ८ सय बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन। कुनै न कुनै बदमासी गरेको भन्दै
धार्मिकस्थलमा ‘अधार्मिक’ कार्य
धार्मिक मान्यता नै छ, दानदक्षिणा गरे धर्म कमाइन्छ। पुण्य प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर, हुने खानेदेखि हुँदा खानेले पनि मठमन्दिर र गुठीका नाममा जग्गाजमिन र धनदौलत दान गर्छन्। दान दातव्य गर्ने धार्मिकस्थलकै सम्पत्तिमा ‘आँखा गाड्ने’ कल्पना पनि गर्न सकिन्न। तर, प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाशुपत क्षेत्रको विकास निर्माण, नियुक्ति र भवन भाडामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। त्यो पनि, पाशुपत क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि गठन भएको कोषकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट। पदाधिकारीहरू पशुपतिको संरक्षण र विकासका लागि नियुक्त भएका हुन् वा पशुपतिको सम्पत्ति धरासायी बनाउन ? भन्ने छुट्ट्याउन गाह्रो भएको छ। को को मात्र यसमा संलग्न छन्, त्यो छानबिनले प्रष्ट पार्ला। तर, प्रसिद्ध धार्मिकस्थलमा ‘अधार्मिक’ कार्य गर्नेको राज चलिरहेको देखिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा १८(५)मा लेखिएको छ, ‘पैत्रिक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ।’ धारा ३८(१)ले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समानवंशीय हक हुने बताउँछ। त्यही मुताविक कानुन बने। संविधानमा यी बुँदा उल्लेख भएको पनि ६ वर्ष भयो। तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकै कारण यसको प्रत्याभूति नागरिकले गर्न पाएनन्। अहिले सरकारले यो विषय सम्झिएको छ। कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित ठाउँमा पत्राचार गरेको छ। यसले परिवारमा समान सोचको विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न मद्दत गरेको छ। तर, यसको कार्यान्वयन गर्न अझै चेतना फैलाउन भने आवश्यक हुन्छ।
ढुंगेयुग त होइन नि सरकार !
माघ लागेदेखि तराई/मधेस क्षेत्रमा घाम लागेको छैन। पानीजस्तै शीतलहर छ। बाक्लो हुस्सु र चिसो हावाले मुटु नै हल्लाउँछ। एक जोर न्यानो लुगासमेत नपाएर गरिब, विपन्न असहायहरू पराल ओढेर बाँचिरहेका छन्। तर, सरकार र सरकारी संयन्त्रहरू कता छन् ? खोज्नुपर्ने भएको छ।
अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता खै ?
बैंकको मुख्य काम नै सर्वसाधारणको पैसा जम्मा गरिदिने र मागेको बेला साँवा÷ब्याज फिर्ता दिने हो। तर, आजभोलि बैंकमै पैसा छैन। ‘रगत मागे दिन सक्छांै, पैसा दिन सक्दैनौं’ भन्ने जवाफ दिन थालेका छन्। ऋण त परै जाओस्, सर्वसाधारणले जम्मा गरेको ठूलो रकम पनि दिन नसक्ने स्थितिमा बैंकहरू पुगेका छन्। यो भनेको बैंकको मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रकै संकटको अवस्था हो। यसले, कुनै पनि बेला मुलुकमा आर्थिक विपत् नआउला भन्न सकिन्न।
आँधीजस्तो लहर : सतर्कता खोइ ?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले डेल्टा र ओमिक्रोनको मिश्रणबाट सुनामी आउने ‘चेतावनीयुक्त’ घोषणा गरेको एक सातामै विश्वमा कोभिड संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ। अमेरिका, युरोप मात्र नभई छिमेकी देश भारतमा पनि कोभिडको नयाँ लहर देखिएको छ। यसबाट कुनै पनि बेला नेपाल संक्रमणको चपेटामा नपर्ला भन्न सकिन्न। डब्लूएचओका अनुसार डेल्टाभन्दा ओमिक्रोनको संक्रमणदर निकै उच्च छ। फैलावट अनुपात र संक्रमण दरका कारण कतिपय विज्ञहरूले यसलाई ‘आँधीजस्तो लहर’ भनेका छन्। अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, फ्रान्स, भारतलगायतका देशमा बढ्दो ओमिक्रोनकै कारण डब्लूएचओले ‘सुनामी’ को संज्ञा दिएको हो। ती देशमा संक्रमणका ‘कीर्तिमान’ घटना बन्दै गएका छन्। फ्रान्स र जर्मनीले त कडा नियम लागू गर्दै यात्रामा पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। कोभिड फैलिन सक्ने भन्दै ‘क्रिसमस र नयाँ वर्ष’ का कार्यक्रमहरू रोकिएका थिए। त्यसै कारण, विश्वलाई बेलैमा सतर्क हुन डब्लूएचओले आग्रह गरिसकेको छ।
नदीको अनियन्त्रित दोहन जलवायु प्रणालीमै असर
विज्ञ र सरोकारवालाले जति चिन्ता जाहेर गरे पनि नदी दोहन रोकिएको छैन। यो पुरानो ‘रोग’ले शालिग्रामका लागि प्रख्यात कालीगण्डकी नदीलाई पनि गाँजेको छ। जसकारण शालिग्राम लोप हुने जोखिम बढेको छ। कालो, चिल्लो र चक्रचिह्न भएको, विष्णुका रूपमा पूजा गरिने विशेष प्रकारको पत्थर हो शालिग्राम। यही कारण भौगर्भिक अध्ययनको केन्द्र बनेको नदीमा जथभावी मेसिन चलाइनु दुर्भाग्य भएको विज्ञले बताएका छन्।
बाआमाप्रतिको कर्तव्य नभुलौं
मुलुकभर चिसो बढ्दै गएको छ। न्यूनतम तापक्रम घट्दा राति र बिहान चिसो छ। अधिकतम तापक्रम घट्दा दिउँसो पनि चिसो बढ्दैछ। काठमाडौं उपत्यकामा चिसो हावा चल्न थालेको छ। तराई क्षेत्रमा हुस्सु र शीतलहर सुरु भएको छ। जाडो समयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम पनि उच्च हुन्छ। उमेर बढ्दै गएका कारण ज्येष्ठ नागरिकमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि क्रमशः ह्रास आइरहेको हुन्छ। त्यसैले जाडोले ज्येष्ठ नागरिकलाई बढी प्रभाव पार्छ।
आखिर कुटाई खाने भैरे ‐चिन्तामणि दाहाल
आखिर कुटाई खाने भैरे भन्ने चर्चित नेपाली उखान अहिले सान्दर्भिक भएको छ । यो उखान नेपाली समाजमा भएका घटना दुर्घटनाबाट लोकोक्तिमा चल्दैआएको हो । ठ्याक्कै यही तिथि मितिमा यो उखान बन्यो भन्ने यकिन गर्न सकिन्न ।
नेकपाका दुई अध्यक्षबीच आरोप/प्रत्यारोपसहित छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव सचिवालयमा पेस भएपछि नेकपामा अब के होला ? विवादको छिनोफानो कसरी होला ? मंगलबारसम्म बैठक रोकेर अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल आआफ्नै तयारीमा जुटेका छन्।